နှစ်ကျိပ်ရှစ်ဆူဘုရား ဒေသစာရီကြွချီပွဲ (ထားဝယ်) - ဝီကီပီးဒီးယား
နှစ်ကျိပ်ရှစ်ဆူမြတ်စွာဘုရား၏ ရုပ်ပွားတော်များ ဒေသစာရီလှည့်လည် ပူဇော်ခံပွဲ သည် တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီး၊ ထားဝယ်မြို့တွင် ကျင်းပသည့် ပွဲတော်တစ်ခု ဖြစ်ပြီး နှစ်စဉ် တန်ဆောင်မုန်းလတွင် ကျင်းပပြုလုပ်သည်။ ဘုရားလှည့်လည်ပွဲသည် ဒေသတွင်း အစည်ကားဆုံးဖြစ်ပြီး မြန်မာနိုင်ငံအရပ်ရပ်မှ ဘုရားဖူးများစွာ လာရောက်ဖူးမြော်ကြသည်။ အဆိုပါပွဲတော်ကို ၂၀၁၂ ခုနှစ်မှ စတင်ကာ တိုင်းဒေသကြီးအဆင့် အခမ်းအနားဖြင့် ကျင်းပခဲ့သည်။
ထားဝယ်မြို့၏ ကျက်သရေဆောင် နှစ်ကျိပ်ရှစ်ဆူမြတ်စွာဘုရား၏ ရုပ်ပွားတော်များ ဒေသစာရီလှည့်လည် ပူဇော်ခံပွဲကို ကောဇာသက္ကရာဇ် ၁၂၇၂ ခုနှစ်မှတင်ကာ ကျင်းပလာခဲ့သည်။ နှစ်ကျိပ်ရှစ်ဆူဘုရားများ လှည့်လည်ပွဲတော်အတွက် နှစ်စဉ် တန်ဆောင်မုန်းလဆန်း ၁ ရက်နေ့တွင် မြို့ပေါ် ရပ်ကွက်များနှင့် အနီးပတ်ဝန်းကျင် ကျေးရွာများသည် ဘုရားတစ်ဆူစီကို ကြိုတင်ပင့်ဆောင်ကြပြီး သက်ဆိုင်ရာ ရပ်ကွက်နှင့် ကျေးရွာများ၏ အဓိကကျသည့်နေရာများတွင် ကိန်းဝပ်စံပယ်တော်မူရန် ယာယီမဏ္ဍပ်များ ဆောက်လုပ်ကာ ပူဇော်ခံလေ့ရှိသည်။ ယင်းကဲ့သို့ မိမိဒေသအတွင်း ကိန်းဝပ်စံပယ်တော်မူသော နှစ်ကျိပ်ရှစ်ဆူမြတ်စွာဘုရားများအား တန်ဆောင်မုန်း လဆန်း ၁ဝ ရက်နေ့နှင့် ၁၁ ရက်နေ့တို့တွင် ရွှေတောင်စားဘုရားကြီးဝင်းအတွင်းရှိ ယာယီစံပယ်ရန် ရပ်ကွက်နှင့် ကျေးရွာများသည် မိမိတို့ပင့်ဆောင်ထားကြသော နှစ်ကျိပ်ရှစ်ဆူမြတ်စွာဘုရားကို အတီး၊ အမှုတ်၊ အက၊ အခုန်များဖြင့် ပြန်လည်ပို့ဆောင်ကြသည်။ ဘုရားကြီးဝင်းအတွင်း၌ နှစ်စဉ် တန်ဆောင်မုန်းလဆန်း ၁၂ ရက်မှ လပြည့်ကျော် ၁ ရက်နေ့ထိ တန်ဆောင်တိုင်ပွဲတော်ကာလအတွင်း ရဟန်းရှင်ပြည်သူများ နှစ်ကျိပ်ရှစ်ဆူ မြတ်စွာဘုရားရုပ်ပွားတော်များကို ပူဇော်ကန်တော့ရန် ယာယီစံကျောင်းတော်ဖြင့် ထားရှိပေးခြင်း ဖြစ်သည်။
ထားဝယ် နှစ်ကျိပ်ရှစ်ဆူ ဘုရားပွဲတော်ကို နောက်ခံထား၍ ဒါရိုက်တာ မျိုးထူးက နေအောင်၊ မို့မို့မြင့်အောင်၊ စိုးမိုးကြည် တို့ဖြင့် ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကား ရိုက်ကူးခဲ့သည်။
↑ ၁.၀ ၁.၁ ၁.၂ ထားဝယ်မြို့ (၁ဝ၇) ကြိမ်မြောက် နှစ်ကျိပ်ရှစ်ဆူဘုရား ဒေသစာရီ လှည့်လည်အပူဇော်ခံ။ တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီး(ပြန်/ဆက်)။ ပြန်ကြားရေး ဝန်ကြီးဌာန (၁၆ နိုဝင်ဘာ ၂၀၁၆)။ ၁၄ ဇန်နဝါရီ ၂၀၁၇ တွင် ပြန်စစ်ပြီး။[လင့်ခ်သေ]
↑ ဘုရားလှည့်လည်ပင့်ဆောင်ပွဲတွင် အသုံးပြုသည့် ဂီတအမျိုးအစားအပေါ် ဝေဖန်မှုများလာ။ Dawei Watch (၁၄ နိုဝင်ဘာ ၂၀၁၆)။ ၁၄ ဇန်နဝါရီ ၂၀၁၇ တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ စိုးမိုးအောင် (၁၈ နိုဝင်ဘာ ၂၀၁၃). "ထားဝယ် တန်ဆောင်တိုင် နှစ်ကျိပ်ရှစ်ဆူဘုရား ဒေသစာရီကြွချီပွဲ စည်ကားစွာကျင်းပ". ၇ ရက် နေ့စဉ်သတင်းစာ (၂၀၈). Retrieved on ၁၄ ဇန်နဝါရီ ၂၀၁၇.
↑ စိုးမိုးအောင် (၃ နိုဝင်ဘာ ၂၀၁၄). "ထားဝယ် နှစ်ကျိပ်ရှစ်ဆူ ဘုရားပွဲအကြောင်း ရုပ်ရှင်ရိုက်ကူး". ၇ ရက် နေ့စဉ်သတင်းစာ (၅၅၁). Retrieved on ၁၄ ဇန်နဝါရီ ၂၀၁၇.
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=နှစ်ကျိပ်ရှစ်ဆူဘုရား_ဒေသစာရီကြွချီပွဲ_(ထားဝယ်)&oldid=639831" မှ ရယူရန်
ဤစာမျက်နှာကို ၁၇ ဇန်နဝါရီ ၂၀၂၁၊ ၀၉:၁၈ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။